Fuula Ka'umsa - Sheer Itiyoophiyaa
Kaampaaniin dhaabbata dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa daangeffamaan omishaa Angooxoo isa guddaa Addunyaa keessati.
Nuti Sheer Itiyoophiyaatti Angooxoo omishna. Tilmaaman gara hojjettoota 12,500 ta’antu Angooxoo biqilchuu, sassaabuu, sadarkaa kennuu fi saamsuu irratti maasii sadi keessatti hojjechaa jiru. Hammi angooxoo miliyoona 2.5 hanga miliyoona 4 ta’u guyyaa guyyaatti qophaa’ee gara buufata xiyyaaraa finfinnee iddoo gara gabaa Awrooppaa itti raabsamutti ergama. Kunis biqilchitoota Angooxoo addunyaa keessa tokkoffaa fi dheemshitoota angooxoo Awurooppaa nu taasisa.
Akka ijotti dhimma ilaalamu qabu
sheer Itiyoophiyaan kaarboonii irraa bilisa dha.
Waggoota dhiyoo keessatti, kaarboonii irraa bilisomuun kaayyoolee naannoo sheer Itiyoophiyaa ta’aa jira. Akka kaampaaniitti haalojii kaarboonii irraa bilisa ta’uu keenya dhihoo kanatti arganne labsuu keenyan baay’isnee kan ittiin boonu dha. Kana jechuunis faanaan keenya kaarboonii omishaa fi gurgurtaa angooxoo keenyaa bilisa taasisa.
Waa'ee bilisa kaarboonii hunda dubbisaa
Dhugaa fi fakkiiwwan
kan sarawwan xuruursawwanii keessaa
wal'aansawwan Sheer keessaa
hospitaala waggaa hundaa
daa'imman manneen barnootaa Sheer keessaa
50% hojjettoota keenya keessaa
Itti Fufiinsa Qabaachuu
Taliigaa ilbiisotaa qindaa'aa
Angooxoowwan biqilchuu keessatti dhukkubni fi Ilbisoonni waan hin hafnee dha. Garuu,akkamiin dhukkubbii fi ilbiisonni kunnen to’atamuun isaanii kan hin hafnee miti. Sheer Itiyoophiyaan tooftaalee baayooloojikaalawaa fi keemikaalan ala ta’an cimsaa jira.
Gumaacha keenya kaayyoowwan guddinaa mootummoota gamtoomanii (UN) walitti fufiinsa qabu ilaaluuf fedha qabeessaa?
kaayyoowwan guddinaa walitti fufiinsa ta'anii (SDGs) kuufama kaayyoowwan addunyaalessaa walitti hidhamiinsa qabanii 17 kan "wixinee fooyya'aa fi fuul dura hundaaf irra caalaatti walitti fufiinsa qabuuti". Sheer Itiyoophiyaa keessatti galmawwan 15 keessatti gumaacha bu'aa qabeessa ni taasifna.
Gumaachawwan keenya daawwadhaa